Ulwazi malunga neSiseko sePielelHELPER
Die ubugcisa na ukukhanya ubugcisa, Phi sie akukho ngaphezulu Imithetho Igama Kennt ngaphezu eyakho yeyakho, i Imithetho yenyaniso nobuhle.
pixel Mncedi ukhangele ihlabathi jikelele Inkuthazo kunye nenethiwekhi yegcisa for amalungelo oluntu chasene Ingcinezelo kunye nenkululeko yokuthetha ukulwa. kunye ubugcisa sifuna ukubaluleka imiba yezentlalo ukubonisa. Sikwasebenza no-Eiiprojekthi zoncedo lophuhliso eAfrika. Eyam Iziko lezonka elibunjiweyo ukuvelisa ukonyusa uzinzo lokutya kwinkampu yeembacu, Imimandla yengxabano & Iintlekele zendalo isonka esomeleleyo emathinini. Siyandisa Uzinzo lokutya eAfrika. Kwindawo Uncedo olungxamisekileyo uyazama pixel Mncedi ecaleni kweefektri zesonka esenziwe enkonkxiweyo eAfrika ezikufutshane UNHCR Kukho iinkampu zeembacu, bancinci izibhedlele zeekhonteyina ezihambayo ukuvula. Nceda usincede phantsi kwento yemenyu inikele kwaye ubaxhase ukusebenza bethu Umbutho. Le vidiyo ilandelayo ikunika umbono omfutshane ngomsebenzi wethu obalulekileyo.
Imiyalezo emibala ibuchaphazela ubomi bethu. Ifilimu yomfanekiso malunga nePixelHELPER
Ujongana njani nezo zolwaphulo-mthetho ngokuchasene noluntu
inzuzo, ubomi esihogweni? Uyihambisa njani i
Isikhumbuzo sobuNazi esivela kwisithili sikarhulumente siye eMorocco? Kwaye: uluhlisa njani udonga lwaseYurophu?
Ngaphandle koko sisebenza Uncedo lophuhliso kunye neeprojekthi zobugcisa ezenziwayo phesheya.
Kungekudala emva kokuba ividiyo ikhutshiwe, kwafika umkhosi waseMorocco
I-BBC yaseArabhu kunye nezigidi zamaSilamsi zikubonile ukutshatyalaliswa kweSikhumbuzo se-Uyghurs Genocide
Oku kubonisa ukuba umsebenzi wethu wentando yesininzi, unyamezelo kunye nokulingana kuyafuneka ngokungxamisekileyo xa amazwe angoozwilakhe & Abanqolobi Nyathela amalungelo oluntu kunye nenkululeko yobugcisa.
Iziko lezonka elibunjiweyo ukuvelisa ukuze wandise Ukuqina kokutya for umntu abangenamakhaya, kwinkampu yeembacu, Imimandla enongquzulwano kunye neentlekele zendalo isonka esomeleleyo emathinini. Siyandisa Uzinzo lokutya e-Afrika & kwi abantu abo bakwi Isitalato esiphilayo.
Nceda usincede phantsi Nikela ngento yemenyu kunye nokuxhasa umsebenzi wombutho wethu.
Isibhengezo sokukhanya kwihotele Sonnenbichl, isihlalo saseJamani sokuhlaselwa ngukumkani waseThailand.
Ukuhlekisa kudala uluntu! Ngexesha lethu ubuntu,uthando kwaye uburharha xhuma, ayinamsebenzi kuthi ukwahlukana, Ukuhlekisa kuyabakhuthaza ukunyamezelana, Ukunyamezela ngochulumanco kokusulungekileyo uburharha, kubungakanani bukhululekileyo ubuntu kufanelekile, eyona njongo ye abantu ibe.
I-Tagesschau ibika kwingoma yethu ngokuchasene ne-King of Thailand.
Ngomnye wethu umsebenzi wobugcisa Masenze ihlabathi libe linye indawo engcono kwaye zikhokele kuyo olukhulu utshintsho loluntu, ejolise kwizinto ezinzulu lwedemokhrasiEgameni ukunyamezelana kufanele pixel Mncedi ibango elifanelekileyo, nobandlululo ukunganyamezeli. Eyona nto kugxilwe kuyo ziiprojekthi inkululeko bokubeka, amalungelo oluntu nangokuchasene Anti-kwamaJuda.
Yenza izinto ezingalunganga ngezizathu ezifanelekileyo!
Die pixel Mncedi alwe nenethiwekhi yomhlaba wonke yabaphembeleli kunye namagcisa iindlela ezingavamile phezu izifo zentlalo. Amagcisa athabatha inxaxheba ahlala esebenzisa itekhnoloji yakutshanje kunye nazo zonke izixhobo zesatire ukubeka iingxaki ekugxileni kweendaba.
Ukuphelelwa yintsingiselo yehlabathi, siyahamba, sizolile kwaye sikhuselekile, sinoyiki engozini kwaye, ngeenjongo eziphakamileyo engqondweni, ukukhusela umhlaba. Inkolelo yethu eyintloko kukuba imigaqo ye-French Revolution "inkululeko, ukulingana kobuzalwana" iya kuvuselelwa ukulwa nokuphindaphinda kokunganakwa kwezopolitiko.
Ukutshatyalaliswa kwe UWalter Lübcke mural ngurhulumente waseMorocco.
Umongameli we-Bundestag uWolfgang Schäuble uthe kwi-Bundestag leyo Lübcke "Ngokuvulekileyo ekungeneni apho uluntu lwethu oluvulekileyo lwakha khona: ngokuzinikela, ukunyamezelana kunye noluntu. Inkululeko yezobugcisa isongelwa kwilizwe lonke Ke ngoko uPixelHELPER!
Umsunguli wePixelHELPER ngumculi okhanyayo u-Oliver Bienkowski waseJamani. Abanye abaculi bokukhanya kunye nokusebenza kunye neecaricaturists ezininzi zisasazekile kwihlabathi liphela kwaye zisebenza kunye kwiPixelHELPER yelizwe elingcono.
zethu Intliziyo ikude, kodwa ethu amathuba anokuphela.
Thina. Ikhefu lokucwangcisa i-Systematic njengefowuni ebalulekileyo yokubhala
Robin Hood Wonke umntu uyazi. Obubi umphangi Isikhundla ufumana ingxaki angienoba izenzo zisekho odumileyo iyakuba ngaphezulu kweyasekuqaleni. Kunye PixelHELPER International ngqubana Abaculi bamazwe ngamazwe be-70 enye ihlabathi elingcono, thabatha kwizityebi zaseYurophu unike amahlwempu kwihlabathi liphela. Silapha. Kunye nesihlwele sakhe ethembekile I-PixelHELPER njengombutho amalungelo oluntu lakhe kwikomkhulu Afrika Ayifumaneki. Kwaphela iminyaka silwa Umhlobo kunye nomkhuseli wamahlwempu kwaye nje ngefungile utshaba abo Amandla kunye nobutyebi ukuba Ku xi nzelelo.
Uncedo oluphuthumayo lwesinkwa eMaroksi
"I-PixelHELPER yongeza eyabo ibhloko yolwakhiwo kubugcisa kunye ne-satire ngomsebenzi wabo"
"IPixelHELPER yenye yezona zinto zintsha ezifezekisa ubugcisa bezenzo zopolitiko kwaye imele uhlobo olwandisiweyo lobugcisa," batsho abanye. Sithi: Ubugcisa kufuneka bube buhlungu, buxhokonxe kwaye kuvukele. Sinoxanduva lobugcisa njengendlela yokuziqinisekisa ngokwentlalo ngomoya woKhanyiso. Amaphulo ethu abonisa amathuba obugcisa njengegunya lesihlanu kurhulumente. Ubugcisa ke ayisosibuko ubambelela kwinto yokwenyani, kodwa sisando osibumba ngayo.
Kwaye sithi: SiyiPixelHELPER
Abuthathaka nabo banxibelelene ngamandla
Phuma uze uzibonakalise.
I-cube ye-PixelHELPER yajikeleza ihlabathi.
Ukusombulula ityhubhu yeRubik kwividiyo "Ehlabathini Lonke ngeentsuku ezingama-80" kufanekisela ikhonkco lobuzalwana eluntwini kwihlabathi liphela, ethi iPixelHELPER imise phantse i-app yayo yokubuyisa imali yabantu abaninzi kwi-Android Playstore kwaye imeme umbukeli ukuba asebenzisane.
Kwikhondo lobomi sishiya amaninzi amanqaku. Kwaye nakubomi babanye abantu abanendlela esinokuwela ngayo kanye kwaye sathonya kakhulu kangangokuthi ubomi babo bakuba benguye. Ngeke kubekho uxabiso olukhulu ngomsebenzi wePielelHELPER Foundation ngaphandle kwefuthe elihle elihlala njalo kuluntu.
Silwa nomdla wehlabathi elingcono.
Ubuntu njengamava anxibelelanayo kumjelo ophilayo. Lawula usasazo ngee-emoticon kuFacebook. IZombi azinalo uhlanga, umbala, okanye inkolo; kuphela bubuchopho! Iprojekthi "iZombies ngaphandle kweMida" iyazibona njengeqonga loncedo lokunxibelelana. Igama lithathwe kwinani leekhompyuter zombie ezilawulwa ngaphandle. Injongo yethu ayikho ngaphantsi kwesisombululo kuzo zonke iintlekele zoluntu ngoncedo olunxibelelanayo oluvela kubabukeli ngomjelo ophilayo. Injongo yethu: iiyure ezingama-24 ukusuka kwiindawo ezishushu zehlabathi. Ukuhambisa iintatheli kwimimandla yemfazwe, ukuhambisa uncedo kwiinkampu zeembacu okanye ukuzingela ngokungekho mthethweni kwiKruger National Park. Isixhobo sethu: Iimpawu ze-Facebook zilawula umhlambi oncedisayo kwaye zigqibe ngento emakwenziwe.
Ukusuka kwindawo yezobuchwephesha yokujonga, isebenza ngendlela yokuba siqale umjelo ophilayo ngezinto zolawulo eziselubala kwaye simeme abasebenzi be "Zombies ngaphandle kwemida" kumjelo wethu ophilayo. Ngale ndlela, sigcina iso kubuchwephesha bezinto ezisebenzayo kwaye siphendule ngokukhawuleza kutshintsho kumjelo ophilayo kwindawo yentlekele.
I-PixelHELPER Foundation | Ukunikezwa kwe-app kuMarrakech, Morocco
Egameni lomsekeli wePixelHELPER, i-2009 yanikezela i-attac umvuzo "Qalisa ukuguqula kwakho" ngomsebenzi wayo kwabangenamakhaya.
I-2013 iqalise uPixelHELPER umkhankaso wokungabi namakhaya, apho amaninzi amajelo aseJamani, kuquka iSüddeutsche Zeitung kunye nenqaku elithile malunga nesenzo sethu.
2014 10 we itshiswe kunye amaphulo e-US wommeli, i NSA / moya scandal waza wafikelela ukugcina up kunye promotions ngeveki nesihloko kumajelo eendaba.
Ngo-2015 abathengisi bezixhobo abatsha bakaGqr. Iqela le-Oetker laziwa kwilizwe liphela ngokukhanya okuthe kratya kwi-Federal Ministry yoKhuselo ubusuku bonke.
Ukusuka kwi Rainbow
I-PixelHELPER ifuna ukukhusela ngokuchasene nabalingqingili kwiindawo eziqhelekileyo zehlabathi. Kukho amazwe amaninzi kwihlabathi njenge-Iran, i-Nigeria, iMauritania, iSudan, i-Yemen, i-Saudi Arabia okanye i-United Arab Emirates, apho ubungqingili abukho mthethweni kwaye bujeziswa ngokufa!
Uthando alukwazi ubulili, akukho mbala wesikhumba okanye unqulo! Uthando alukwazi umda! Sifuna ukusasaza le nkcazo, i-PixelHELPER, emhlabeni jikelele ngeprojekthi yokukhanya yobugcisa "Ukusuka kwi-Rainbow".
I-capsule engxamisekileyo ebandayo yabantu abangenamakhaya
Ubusika buyasondela kwaye abantu abangenamakhaya badinga uncedo lwethu. Isisombululo sethu: I-PixelHELPER ebandayo ingxakeko engxamisekileyo yokuthintela abantu ekubandeni nasekufeni kwizitalato zaseJamani. Rhoqo ngonyaka amaJamani ambalwa abulawa kukungqubeka kweenqwelomoya kunabantu abangenamakhaya bafa ngumkhenkce. EJamani kukho ngaphezulu kwesiqingatha sesigidi esingenamakhaya ngaphandle komnatha wokhuseleko lwasentlalweni. Ngokuphindaphindiweyo abantu bathunyelwa ngaphandle komnyango xa iqondo lobushushu lingaphantsi kwe-zero kwaye emva koko babanda kabuhlungu. Kwaye ingxaki yokungabi namakhaya eJamani ngokwayo ayiqwalaselwa ngendlela ezinzileyo. Kulapho inkqubo yethu yokuphinda uhlaziyeke yabantu abangenamakhaya iza kusebenza khona. Ukuqala ngee-capsule ezingxamisekileyo ezibandayo ukukhusela abantu abangenamakhaya ekufeni okunokuphepheka ngokulula, sakha inkqubo elwa neengxaki ezisisiseko zokungabi namakhaya, ukunqongophala kokhuseleko, ukungabikho kwamathuba emisebenzi kunye nokuzihlukanisa eluntwini, kwaye ke oko kunceda abantu ukuba babuyele kubomi obuqhelekileyo kancinci kancinci yenza.
Sifana nje kunye neenkwenkwezi ezincinane kwieplanethi encinci ejikeleza inkwenkwezi ephakathi.
Malunga nePixelHELPER NgoFebruwari 4th, 2021Oliver Bienkowski